Walxaha kiimikeed ee saafida ah iyo kuwa aan saafida ahayn | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Waa Qiso ka Turjumaysa Xaaladaha Adduunka ka jira, Tan Soomaalida ugaarka ah
Sida Loo Xaqiijiyo Amniga Dhismayaasha
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, December 2, 2019
Sigaarka Oo Dhibaato U Geysta Maskaxda
Maxamed Xirsi Faarax — June 10, 2020
Curiyaha saafida ah ama isku dhiska saafida ah, waxa ay ka kooban yihiin hal walax oo walax kale kuma ay dhexjirto. Shayada aan saafida ahayn waxay noqon karaan isku jirka curiyayaal, isku jirka isku dhisyo ama isku jirka isku dhis iyo curiye.
Walxaha kiimiked ee saafida ah:
Cunooyinka iyo cabitaanada waxaa lagu xayeysiiyaa in ay yihiin saafi. Tusaale, waxaa arkaysaa kartoomada “casiir liin macaan saafi ah” , “biyo saafi ah”. Taas oo la micno ah in aana waxkale lagu darin intii lagu gudo jirey soo saaridooda warshadeed. Sikastaba, saynis ahaan marka aan u eegno walxahan ma ahan kuwo saafi ah waayo saynisku waxa uu rumaysan yahay in walaxda saafida ah ay ka kooban tahay hal curiye ama hal isku dhis. Biyaha macdantaa intooda badani waa biyo, laakiin waxaa ku dhex qasan walxo kale. Maadooyinkaas kale ee kujira waxaa magacyadoodu ku taxan yihiin waraaqda ku dhagsan caagada biyuhu kujiraan. Sidaa darted biyaha saafida ah waxa ay ka kooban yihiin biyo iyo walxo kale.
Hadii aad aragtid saxarrada biyaha, waxa kaliya ee aad arkayso waa molikuyuulada biyaha, laakiin waxaa ku jira saxarro kale. Waa ay adag tahay gabi ahaan in aad hesho walax dhamaanteed saafi ah waayo markasta walxaha waxaa kudhex jira walxo kale. Xataa biyaha aadka saafiga u ah waxay ka koobaan yihiin oo kumilan neefyo hawada kaga soobiiiraya.
Isku jirku waxa uu ka kooban yahay walxo kala duwan kuwaas oo aan ku midooobin ama iskugu tagin hab kiimikeed. Tusaale, baakad macmacaan ah waxa uu ka kooban yahay isku jir midabo kala duwan leh oo macmacaano ah. Macmacaanadu midba midka kale kuma dhagana sidaa darteed si sahlan ayaa loo kala sooci karaa:
Isku jirka jajabka birta ayroon iyo buddo salfar ah waa ay fududahay in lakala saaro ayadoo la adeegsanayo birlab. Jajabka birta ayroon waxaa soo jiidanaya birlabta halka budadu ay ku harayso meesheeda.
Birlabta ayaa soo jiidanaysa jajabka birta ayroon, kalana soo dhex baxaysa budada salfarta.
Milidu waa wado kamid ah habka loo sameeyo isku jirada. Tusaale, marka cusbo lagu walaaqo biyo, cusbadii waxa ay ku milmaysaa biyaha waxaana samaysamaya biyo cusbo leh.
Milme: shayga ama walaxda milantay waxaa loogu yeeraa milme
Mile: walaxda milmaha mishey ayaa loogu yeeraa mile
Biyaha cusbada leh; cusbadu waa milme halka biyuhu yihiin mile. Saxarrada milmaha iyo miluhu gabi ahaan si wado jir ah ayey isku dhex galayaaan.
Siimow (baahid ama faafid):
Siimow waa wado kale oo lagu samayn karo isku jir. Saxarrada kala duwan ee walxaha waa ay isku qasmayaan inta lagu gudajiro faafida. Tani waxa ay u dhacdaa:
Sidhakhso ah neefaha, waayo saxarradoodu waxay si dhakhso ah ugu fidayaan dhinacyada oo dhan.
Sitartiib ah hoorayaasha, waayo saxarradoodu waxa ay u dhaqdhaqaaqayaan hareerahooda ayagoo midba midka kale riixayo.
Gabi ahaan kama dhaco adkayaasha, waayo saxarradoodu waxay meeshay joogaan ku samaynayaan gargariir oo kaliya masamaynayaan wax dhaqdhaqaaq socod ah.
Siimowga waxaa si fudud ugu fahmi karnaa sababta urka cunada la karinayo uu ugu faafayo guriga iyo sidoo kale sababta dhibic rinji ah ay si iskeed ah ugu faafayso koob biyo ku jiraan markii lagu dhibciyo.
Iskudhis waxa uu ka kooban yahay curiyayaal kala duwan kuwaas oo iskugu tagay qaab kiimikeed, isku dhisku waxa uu ku samaysmaa falgal kiimikeed, si aad u kala saartidna waxa uu ubaahan tahay in aad samayso falgal kiimidkeed oo kale. Sawirka hoos nooga muuqda waxa uu natusinayaa marka jajabka ayroon ay falgal lasamayso budo salfar ah, waliba falgal kiimikeed, halkii la isku dari lahaa oo kaliya.
Atamyada ayroon iyo salfar waa ay midoobayaan ayagoo samaynaya ayroon salfaydh, sidaas darteed waa ay adag tahay in la kala saaro.
Astaamaha isku jirka iyo isku dhisyada:
Isku jirka waxa uu leeyahay astaamo ka duwan kuwa isku dhisyada. Kala duwanaashaha waxa aynu ku soo koobaynaa shaxdan soo socota:
Isku jir Isku dhis
Waxa ay ka kooban yihiin Wax yaalo kala duwan ayey ka kooban yihiin wayna kala duduwanaan karaan xadiga isku jirkoodu Waa ay xadaysan yihiin waxa ay ka kooban yihiin
Midowgooda ama isku tagidooda Walxaha kala duwani iskuguma tagaan hab kiimikeed Curiyayaasha kala duwan waxa ay iskugu tagaan hab kiimikeed
Astaamahooda Walax kasta oo isku jirka kamida waxa ay leedahay astaamo ugaar ah Isku dhisku waxa uu lee yahay astaamaha curiyayaasha kala duwan ee uu ka kooban yahay
Kala saaridooda Waa ay fududahay kala saaridoodu Waa ay adag tahay kala saaridoodu, waxa kaliya ee lagu kala saari karana waa hab kiimikeed oo kaliya.
Tusaale Hawada, Biayaha badda, Dhagaxaanta Biyaha, kaarboon labo oksaydhka, magniisiyom oksaydhka iyo soodiyoom koloraydhka
Noocyada kala duwan ee walxaha kiimikeed:
Curiye, kaas oo ka kooban hal nooc oo atamyo ah.
Isku dhis, kaas oo ka kooban labo ama ka badan nooc oo atamyo isku tagay ah.
Isku jir, kaas oo ka kooban labo ama ka badan oo walxo kala duwann kuwaas oo aan isku tagin.
Waxlo kala wudan, kuwaas oo iskugu jira curiyayaal ama isku dhisyo.
Tags: Walxaha kiimikeed ee saafida ah iyo kuwa aan saafida ahayn
Next post Tusaha kalgalka
Previous post Madax-Addeygii Rer Banii Israa’iil Iyo Xujooyinka Caddaa Ee uu Alle Siiyey.